काभ्रे पाँचखालमा संगठन विस्तार गर्न माओवादी आक्रामक, एमाले मौन ! – मिलिजुली खबर
काभ्रे पाँचखालमा संगठन विस्तार गर्न माओवादी आक्रामक, एमाले मौन !
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा माओबादी केन्द्रले आफ्नो संगठन बिस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । अन्य पार्टीहरू भने लगभग मौन जस्तै छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजन पछि माओवादी आफ्नो संगठन निर्माणमा केन्द्रित बनेको हो ।
माओवादी केन्द्रले धमाधम वडा कमिटी गठन गरिरहेको छ । नगरपालिकाको १३ वटा वडा मध्ये ४ वटामा गठन भैसकेको नगर कमिटी संयोजक राम गोपाल भुजेलले जानकारी दिनुभयो । वडा नम्बर १३, २, १ र ११ मा संगठन विस्तार सकिएको हो । बाँकी वडाहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै जाने संयोजक भुजेलले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले वडा तहसम्मै आफ्नो महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठन समेत गठन गरिरहेको छ । तर एमालेको गतिविधि भने ठप्प प्राय: देखिन्छ । माओवादीले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता धमाधम आफ्नो पार्टी प्रवेश गराईरहेको छ ।
पाँचखालमा एमालेको निकै राम्रो जनधार मानिन्छ । तर २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेमा भएको अन्तरघातले बलियो आधार हुँदा हुँदै हार बेहोर्न बाध्य भयो । अहिले पार्टीभित्र अन्तर कलहले एमालेका कार्यकर्ता दोधारमा छन् । पाँचखाल नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि देखि पुरानो एमालेका नेता समेत ओली र माधव-झलनाथ गुटमा विभाजित छन् ।
पाँचखालमा माओवादी केन्द्रका केहि नेताहरू एमालेको संस्थापन (ओली) पक्षमा लागेका छन् । तर पनि उसले आक्रमक ढंगबाट वडा स्तरसम्म संगठन विस्तार गरिएको छ । फेसबुकमा सार्वजनिक तस्बिर हेर्दा माओवादीको कार्यक्रममा उपस्थित हुने संख्या उल्लेख्य नभएपनि संगठनलाई चुस्त राख्न गरेको पहललाई भने एमालेले पनि सिक्नुपर्ने पो हो की !
काभ्रे कोशीपारीका पूर्व श्रमराज्य मन्त्री उप्रेतीलाई पत्नी शोक